ဝန်ထမ်း Archives - Myitter
လေအေးပေးစက်၊အဲကွန်းများကို ပိတ်ထားရန်နှင့် လေကောင်းလေသန့်ရရှိအောင် ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ထားပေးခြင်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းစေနိုင်တယ်လို့ စင်ကာပူကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Straits Times ရဲ့အဆိုအရ ရာသီဥတုအေးပြီးခြောက်သွေ့သောနေရာတွေမှာဆိုရင် ဗိုင်းရပ်များရှင်သန်တယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုရင် အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံမျိုးဖြစ်သည့် မလေးရှားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှု လျော့နည်းနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးရှိပါတယ်။ Singapore’s Ministry of Health’s (MOH) ရဲ့chief health scientist […]
”ရတနာပုံဈေးမီးလောင်မှုမှာ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ညီလေးက ဝန်ထမ်းမဟုတ်လို့ လစာမရပါဘူး စေတနာ့ဝန်ထမ်းသက်သက် အရန်မီးသတ်လေးပါ”
January 19, 2020 Myitter 0
၁၇ ရက်နေ့ ည က ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ ရဲ့ Sky Walk မီးလောင်မှု ဖြစ်စဉ်မှာရဲဝံ့ စွာ မီးငြိမ်းသတ်ရင်း ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ တဲ့ ပုလဲ ငွေ ရောင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က အရန်မီးသတ် ညီလေးစီ ဒီနေ့ […]
ရွှေ တွေ ကျောက်တွေ နဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို ပိုင်ရှင်ထံပြန်အပ်ခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ဒီဝန်ထမ်းရဲ့ စိတ်ဓာက်ကို ဂုဏ်ပြုရအောင် ရှဲပေးသွားကျပါဗျာ…
November 25, 2019 Myitter 0
ဒီနေ့ကျွန်တော့ကား လာဝယ်တဲ့ နယ်မှလာသော မိသားစု ကားဝယ်ပြီး အပြန် ကျွန်တော့်တို့ starcity Thanlyin က ကား ပါကင်ထဲမှာ ပုံပါ အိတ် ကျန်ခဲ့ပါတယ် ၊ starcity က လုံခြုံရေးက တွေ့ပြီး ရုံးခန်းမှာ သိမ်းပြီး ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အခါ ပုံထဲက […]
ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ သယံဇာတမြေ ….
July 29, 2019 Myitter 0
ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ သယံဇာတမြေ …. Breaking News အမြင့်ပေ ၁၀၀၀ခန့်ရှိ ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးနှင့်ကုမ္မဏီဝန်ထမ်း ၁၅ ဦးသေဆုံး ဖားကန့် ၊ဇူလိုင် ၂၈ ကချင်ပြည်နယ်၊ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မူအုပ်စု၊ကောင်စံကျေးရွာ ၊ကရင်ချောင်ကျေးရွာ ၊ချောင်းဖျားကျေးရွာအနီးရှိ အမြင့်ပေ တစ်ထောင်ခန့်ရှိသည့် ကျောက်စိမ်းကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် အနီးရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် […]